Sida Loo Xalliyo Lacagta Oo Isla Markiiba Loo Helo - The Wealth Circle
Bogga ugu weyn Sida loo Xarigo Lacagta oo isla markiiba loo Helo
isha sawirka: Gobankingrate
Mararka qaarkood waxaad u baahan tahay inaad si degdeg ah lacag u dirto si caalami ah: waxay noqon kartaa masiibo aan la filayn, deyn waqtigeedii dhaaftay, ama qof aad jeceshahay oo dibadda jooga una baahan gargaar, laakiin ma garanaysid sida lacagta loogu xawilo adeegga siliga.
Khiyaamadu waa in la fahmo sida wax kala beddelashadu u dhacayso iyo kharashyada laga yaabo in lagu dabaqo. Xawilaadaha siliggu waa isla markiiba, taas oo macnaheedu yahay in lacagtu ka baxdo akoonkaaga isla markaaba. Sababtoo ah tani waa xaalad, ma jirto si loo baabi'iyo wareejinta siliga mana awoodi doontid in laguu soo celiyo.
Markaa, ka hor inta aanad mid dejin, hubi inaad si dhab ah u rabto inaad lacagta u dirto iyo inaad ogtahay cidda lacagtu u socoto. Si kastaba arrintu ha ahaatee, haddii aad u baahan tahay inaad si degdeg ah lacag u dirto, waxaa jira xalal badan oo la heli karo, laakiin waa inaad doorataa alaab-qeybiyaha ugu fiican ee baahiyahaaga.
Boostada waxay ku bari doontaa sida loo xawilo lacagta si degdeg ah, iyo sidoo kale qaar ka mid ah tixgalinta la qaato marka la xadhkahayo lacagta iyo qalabka loo isticmaalo marka lacagta xadhkaha lagu xidho.
Maxaa la tixgelinayaa marka la samaynayo xawaalad degdeg ah?
Inkasta oo bixiyahaagu kuu ogolaado inaad lacag u soo dirto khadka isla markaaba, dhammaan wax kala iibsiga ma suurtowdo.
Haddii aad u baahan tahay lacag si aad dhakhso ugu gaadho ka faa'iidaystahaaga, maskaxda ku hay in adeeg kastaa uu bixiyo habab kala duwan oo xawilaad ah oo leh xawaare kala duwan.
Waxyaalaha saamaynta ku yeelan kara sida degdega ah ee lacagta loogu kala diri karo waxa ka mid ah.
Wadamada aad u kala wareejinayso lacagaha
Wax kala beddelashadaadu waxay u badan tahay inay dhakhso badan tahay haddii aad lacag u dirayso laba waddan oo leh dariiqyo xawilaad oo caan ah.
Tusaale ahaan, haddii aad lacag ka soo guurinayso Maraykanka una guurayso Boqortooyada Midowday, nidaamku caadiyan si cadaalad ah ayuu u degdegay, shirkado badana waxay ku siin karaan wareejin degdeg ah natiijada.
Habka lacag bixinta la doortay
Sida aad u bixiso wareejintaada, sida nooca geynta, waxay saamayn kartaa wakhtiga ay qaadanayso inaad timaado. Haddii aad lacagtaada ku maalgeliso wareejin bangi.
Tusaale ahaan, inta badan waxay qaadan doontaa waqti dheer sababtoo ah bangigaagu wuxuu u baahan doonaa inuu xaqiijiyo wax kala iibsiga, halka xawilaadda siliguna ay aad u dhaqso badan yihiin laakiin aad qaali u ah.
Helitaanka wareejinta maaliyadeed
Waxaa jira dhowr siyaabood oo ka faa'iidaystahaagu uu ku heli karo lacagaha aad soo dirto, iyo xawaaraha wareejintaada waxaa lagu go'aamin doonaa midka aad doorato.
Haddii adeeggu bixiyo xawilaad degdeg ah, waxay inta badan ku jiraan qaab lacag caddaan ah oo laga qaado.
Adeegga xawilaadda lacagta ee aad doorato
Xawaaraha dhabta ah ee wareejintaada waxaa si weyn u saameeya shirkadda wareejinta ee aad isticmaasho. Marka ay timaado helitaanka, ganacsiga, iyo xawilaadda lacagta, bixiyayaasha si kala duwan ayay u shaqeeyaan.
Xawaaraha wareejinta waxaa lagu go'aamin doonaa hufnaanta nidaamyadan.
Haddii aad hore u lahayd akoon bixiyaha lacag bixinta
Haddii aad hore u leedahay akoon firfircoon oo leh shirkad xawilaad oo bixisa xawilaad degdeg ah, waxaad samayn kartaa wareejin isla markiiba.
Markaad samaysato akoon cusub, waxay caadiyan qaadanaysaa wakhti ay shirkadu xaqiijinayso akoonkaaga. Tani waxay keeni kartaa carqalad yar oo ku timaada wax kala iibsigaaga.
Sida loo xawilo lacagta isla markiiba
Xawaaladaha siligga waxaa sida caadiga ah loo sameeyaa laba siyaabood midkood: inta u dhaxaysa bangiyada ama iyada oo loo marayo adeegga xawilaadda lacagta sida Western Union. Waxoogaa daraasad ah samee ka hor intaadan go'aansan midda aad shaqaaleysiinayso.
Xawilaadda siliga akoontiga bangigu caadi ahaan waa ka kharash yar yahay isticmaalka adeeg sida Western Union (waxay kuxirantahay arrimo gaar ah).
Si kastaba ha ahaatee, iyada oo ku xidhan bangigaaga, ka faa'iidaysiga adeegga nooca Western Union ee siligga lacagta ayaa laga yaabaa inay ku habboonaato sababtoo ah waxaa jira dukaamo muuqaal ah iyo sidoo kale goobo kale oo meelo kale ah, sida dukaamo badan iyo dukaamo ku habboon, waxayna leedahay saacado dheer.
Iska ilaali fannaaniinta.
Ka digtoonow haddii aad wax ka iibsanayso shirkad taas oo kaaga baahan inaad silig lacag ah qaab lacag bixin ah. Xasuusnoow in lacagta aad dirto inta badan ay baxdo isla markaaba, mana jirto qaab aad ku joojin karto wax kala iibsiga. Way fiicantahay in aad lacagta la soo xiriirto oo kaliya dadka aad taqaan oo aad ku kalsoontahay.
Go'aami isha lacagaha siliga
Caadi ahaan waxaad si toos ah lacag uga soo diri kartaa akoonkaaga hubinta, laakiin sidoo kale waxaad isticmaali kartaa kaarka deynta marmar. Marka aad isticmaasho kaarka deynta, kani inta badan waxaa loola dhaqmaa sidii hormar lacageed oo caddaan ah, taas oo macnaheedu yahay in ay la socoto qaar ka mid ah khidmadaha bixiyaha kaadhka deynta.
Markaad isticmaasho kaarka deynta, sida caadiga ah waxaa loo arkaa hormarin lacageed, taas oo macnaheedu yahay in lagaa qaadi doono kharashka shirkadda kaararka deynta.
Soo ururi macluumaadka lagama maarmaanka ah
Macluumaadka aad u baahan doonto way kala duwanaan doontaa iyadoo ku xidhan adeegga aad doorato, laakiin guud ahaan, waxaad u baahan doontaa inaad ururiso: magaca bangiga oo lacagaha laga helayo,
lambarka darida ee qaataha macluumaadka akoonkaaga bangiga,
tilmaamo kasta oo dheeraad ah oo laga yaabo in loo baahdo, sida wax kasta oo ku saabsan keenista lacagta caddaanka ah
Wixii macluumaad dheeraad ah, la xidhiidh bangigaaga ama adeegga xawilaadda siliga.
Si aad u heshid habka ugu wanaagsan ee lagu bilaabi karo wax kala iibsiga, wac ama booqo shabakada adeega fiilooyinkaaga.
Haddii aad u baahan tahay inaad buuxiso dukumeentiyada qaar (kuwaas oo aad ugu badan), waxa laga yaabaa inaad guriga ku bilawdo ka hor intaadan meelna tagin. Xaaladaha qaarkood (sida xawilaadaha siligga yaryar), waxa laga yaabaa inaad awood u yeelatid inaad dhammaystirto wax kala iibsiga oo dhan onlayn adoon waligaa ka bixin gurigaaga.
Hubi wixii kharash dheeraad ah
Haddi aad isticmaasho kaarka deynta ama akoon bangi, xawilaada siligu had iyo jeer waxay ku kacdaa lacag (oo ka sarreeya kharashyada wax kala iibsiga kaararka deynta), markaa hubso inaad wax ka weydiiso kharash kasta ka hor intaadan sii wadin. Daraasadani waxay sidoo kale kaa caawin kartaa inaad go'aamiso adeegga kugu habboon inaad shaqaaleysiiso.
Xitaa haddii aad gudbiso codsiga wareejinta siliga onlaynka, hubi inaad la socoto shirkadda aad isticmaashay si aad u hubiso in wax walba u dhaceen sidii la qorsheeyay iyo inaad xaqiijiso maalinta saxda ah ee siliga la diri doono.
Ku diritaanka lacag isla markiiba akoonkaaga bangiga
Ku dirida lacag isla markiiba khadka tooska ah akoonkaaga bangiga waa u fududahay xawilaadaha gudaha, waxaana caadi ahaan lagu heli karaa taabashada badhanka abka bangigaaga onlaynka ah ama isticmaalka lacagaha BACS.
Si kastaba ha ahaatee, ma fududa inaad si degdeg ah lacag u dirto adigoo isticmaalaya bangigaaga xawilaadaha dibadda.
Habka xaqiijinta SWIFT ee adag ee bangiyada ay isticmaalaan awgeed, lacagtu waxay qaadan kartaa 1 – 5 maalmo shaqo si ay ugu soo muuqato akoontiga qaataha.
Ma aha in la sheego khidmadaha, kuwaas oo muhiim u ah adiga iyo qofka aad lacagta u dirayso labadaba.
Xawaaladuhu waa isla markiiba koontada bangigaaga.
Akhbaarta wanaagsan ayaa ah in lagu xaqiijiyo xawaaladaha aysan qaadan waqti dheer, Kahor intaadan dhameystirin wareejintaada, waxaad si fudud uga wareejin kartaa lacagaha akoonkaaga bangi akoon qof saddexaad.
Immisa ayey ku kacaysaa silig lacag?
Kahor intaadan go'aansan inaad lacag u dirto isla markaaba, waa inaad baartaa noocyada kala duwan ee khidmadaha wareejinta iyo xad dhaafka sarifka lacagaha ee jira.
Inta badan xawaaladaha waxay lacagtooda ku sameeyaan iyagoo ku dalaca lacag siman ama calaamadaynta sarifka lacagaha.
Sicirka sarifka ayaa saameyn weyn ku yeelan kara wadarta qiimaha kala wareejinta, gaar ahaan xaddi badan. Marka la isticmaalayo xawaaladaha online-ka ah, sarifka sarifku waa 1-2 boqolkiiba.
Qalab Loogu Diro Lacag Dhakhso
Zelle waa adeeg lacag bixineed oo caan ah kaas oo kuu ogolaanaya inaad dirto oo aad lacag ku hesho wax kala iibsiga bangiyada. Intii lagu jiray qeybtii hore ee 2020, shirkaddu waxay gacanta ku dhigtay $519 milyan oo macaamil ganacsi ah.
Shakhsiyaadka waxay isku qori karaan Zelle iyaga oo isticmaalaya abka mobaylka bangigooda ama soo dejisan karaan abka Zelle.
Midkood soo diray ama qaataha ahi waa in ay Zelle ka helaan bangigooda ama ururka daynta.
Lacag-bixinta Zelle si degdeg ah ayaa wax looga qabtaa, iyadoo lacag lagu heli karo xaaladaha intooda badan daqiiqado gudahood, in kasta oo ay jirto xad toddobaadle ah oo ah $500. Haddii aad rabto inaad si dhakhso ah lacag ugu dirto kuwa aad jeceshahay, Zelle waa jidka loo maro.
Boorsooyinka dhijitaalka ah ayaa sii koraya oo caan ah, iyo mid ka mid ah barnaamijyada boorsada boorsada ugu caansan waa Venmo. Venmo, oo laga heli karo IOS iyo Android, ayaa fududaynaysa in lacag loo diro qoyska iyo asxaabta. Venmo, oo ka duwan Zelle, kuma xidhna hal bangi.
Labada dhinacba waxay u baahan doonaan akoon Venmo, kaas oo si fudud loo samayn karo iyadoo la isticmaalayo lambarka taleefanka gacanta ama ciwaanka iimaylka.
Isticmaalayaashu waxay maalgelin karaan xisaabtooda Venmo ama waxay ku xidhi karaan isha lacag-bixinta dibadda sida xisaab bangi ama kaarka deynta. Isticmaalayaasha Venmo hadda waxay ku xidhi karaan telefoonadooda iyo xiriirada Facebook.
Marka la dejiyo, isticmaalayaashu waxay bixinayaan iyagoo galaya magaca xiriirka, sababta lacag bixinta, iyo qaddarka lagu wareejinayo. Lacagtu waxay isla markiiba ku soo baxaysaa akoontiga Venmo ee qaataha.
Waxay leedahay xadka macaamil ganacsi ee usbuuclaha ah oo ah $4,999.99 wax kala beddelashada qof-ka-qof, iyo 3% khidmad ayaa laga jarayaa marka lagu bixinayo kaarka deynta.
PayPal waxaa isticmaala malaayiin dukaameystayaal ah oo adduunka oo dhan ah, laakiin sidoo kale waa hab aad u fiican oo lacag loogu diro qoyska iyo asxaabta marka loo baahdo. Xisaabaadkeedu waa bilaash in la furo waana fududahay in la isticmaalo.
Waxa kaliya ee ay tahay inaad sameyso waa isdiiwaangeli oo ku xidhid xisaab bangi ama kaadhka lacag bixinta. Waxaad u baahan tahay oo keliya iimaylka ama lambarka taleefoonka qaataha. Soo dirayaashu waxay lacag ku shubi karaan akoonkooda PayPal ama waxay si toos ah lacag uga soo diri karaan akoonkooda ama kaarka ku xidhan.
Si kastaba ha ahaatee, kaliya xawilaadaha qaarkood waa bilaash, markaa laba jeer hubi ka hor intaadan lacag dirin.
Tusaale ahaan, xawilaadaha Maraykanka ee lagu maalgeliyo kaarka deynta, kaarka deynta, ama PayPal Credit waxay ku kici doontaa 2.9 boqolkiiba kharash iyo $0.30 kharash go'an.
Xawaaladaha caalamiga ah ee lagu sameeyo lacag caddaan ah ama xisaab bangi oo ku xidhan, kharashka wax kala beddelashadu waa 5% wadarta la diray ($0.99 min ilaa $4.99 max); credit, debit, ama PayPal Credit, ku dar 2.9 boqolkiiba wadarta la maalgeliyay oo lagu daray khidmad go'an oo ku salaysan lacagta.
Xisaabaadka la xaqiijiyay, waxa ay leedahay xadka wax kala iibsiga oo dhan $10,000 ilaa $60,000 halkii wax kala iibsiga.
Appka Cashuuraha ah waa hab kale oo fudud oo lacag loogu xawilo kuwa aad jeceshahay. App-ka Casharka, oo uu sameeyay Square, waxa uu u oggolaanaya isticmaaleyaasha in ay abuuraan xisaabaadyo bilaash ah oo ay si fudud lacag ugu diraan kuwa kale.
Way fududahay inaad lacag ku bixiso adigoo isticmaalaya Appka Cash. Fur app-ka, geli xadiga xawilaadda iyo iimaylka ama lambarka taleefoonka qaataha, geli sharraxaadda lacag-bixinta, ka dibna tabo Pay.
Lacag diristu waxay lama huraan u tahay isticmaalka akoon bangi oo ku xidhan ama kaarka deynta. Ma jiraan wax kharash ah oo lagu isticmaalo adeegeeda isku-fac, si kastaba ha ahaatee, waxa jira 3% lacag dirida isticmaalka kaarka deynta iyo 1% ama 1.5 % kharashka dhigaalka degdega ah.
App-ka kaashka ah waxa uu xadidayaa lacagta aad u diri karto dadka kale. Soo-dirayaashu waxay ku xaddidan yihiin xadka toddobaadlaha ah ee $7,500.
Haddii aad u dirto in ka badan $250 hal macaamil ganacsi ama wax kala beddelasho badan gudahood todoba maalmood gudahood, abka waxa laga yaabaa inuu codsado aqoonsi dheeraad ah.
Shakhsiyaadka waxay isticmaali karaan Google si ay lacag ugu diraan isla markiiba. Google Pay waa isku darka Android Pay iyo Google Wallet. Akoonada Google waa bilaash in la sameeyo waxaana laga yaabaa in laga galo shabakada iyo abka mobaylka.
Haddii aad hore u lahayd akoon Google, waxaad isticmaali kartaa si aad u dejiso Google Pay. Google Pay waxay ku soo dirtaa lacag kaadhka deynta ama akoon bangi oo ku xidhan. Ku dirida lacagta Google Pay hadda waxa kaliya oo laga heli karaa Maraykanka iyo Hindiya.
Ma jiro wax kharash ah oo wax kala beddelasho ah iyo xadka wax kala beddelashada oo ah $10,000 halkii macaamil ganacsi, $10,000 toddobaadkii, iyo $3,000 24 saacadoodba dadka deggan Florida.
Apple Pay wuxuu kuu ogolaanayaa inaad lacag ugu dirto qaraabada iyo asxaabta fariimaha ama Siri ee iPhone kaaga, iPadka, ama Apple Watch. Looma baahna in lagu rakibo software dheeraad ah si loo isticmaalo adeegan.
Lacag bixinta isla markiiba waa la bixiyaa. Nasiib darro, isticmaalayaasha Android, iyo sidoo kale qaar ka mid ah aaladaha Apple ee da'da weyn, ayaa nasiib darro ah.
Si aad u isticmaasho adeegga, waa in aad marka hore kaadhka deynta ku xidhid Apple Pay. Si lacag loogu wareejiyo ama lagu helo Apple Pay, isticmaalayaashu waa inay ahaadaan ugu yaraan 18 jir iyo muwaadiniinta Mareykanka.
Lacagta loo diro dadka kale waxaa lagu shubaa akoonkooda Apple Cash, halkaas oo isla markiiba loo isticmaali karo ama lagu wareejin karo akoon bangi ama kaarka deynta Visa. Ma jiraan wax kharash ah, iyo xadka ugu badan ee wax kala iibsiga asbuucii waa $10,000.
Western Union waa shirkadda ugu da'da weyn liiskan, iyadoo shaqaynaysay ilaa 1800-meeyadii.
Dadka intooda badan ma tixgeliyaan Western Union inay tahay shirkad fintech ah, inkastoo ay ka caawinayeen dadka inay si elektaroonig ah u gudbiyaan lacagta adduunka oo dhan tan iyo 1871.
Western Union waxay kuu ogolaataa inaad lacag ugu dirto qoyska iyo saaxiibada siyaabo kala duwan, oo ay ku jiraan online, iyada oo loo marayo abka mobaylka, shakhsi ahaan xafiiska Western Union, telefoonka, iyo goobaha tafaariiqda ee dooro.
Iyadoo ku xiran sida aad lacagta u dirto, waxaad ku diri kartaa adigoo isticmaalaya lacag caddaan ah, kaarka deynta, ama kaarka deynta. Waxaad lacag u diri kartaa akoon bangi, boorsada gacanta, ama goobta lacagta caddaanka ah. Si aad lacag u dirto ama aad ku hesho adigoo isticmaalaya Western Union, waa inaad ahaataa ugu yaraan 18 jir.
Beddelka wareejinta ee ay bixiso Western Union waa ikhtiyaar macquul ah oo laga helo shirkad caan ah. Xadka wareejinta waxaa lagu go'aamiyaa goobta, adeegga, iyo habka lacag bixinta.
Sidee degdeg ah ayay xawilaadaha siligu u maraan?
Xawaaladaha siligga gudaha waxaa inta badan lagu farsameeyaa 24 saacadood gudahood halka xawilaadaha siligga caalamiga ah ay qaadan karaan inta u dhaxaysa 1-5 maalmood oo shaqo.
Xawaaladaha degdega ah miyay dib u noqonayaan?
Xawaaladaha degdega ah maaha kuwo dib loo celin karo markaa waa muhiim inaad si taxadar leh u hubiso faahfaahin kasta ka hor inta aadan lacag dirin.
Wareejinta degdega ah ma la diri karaa meel kasta oo aduunka ah?
Guud ahaan marka loo eego, waa suurtogal in si degdeg ah lacag loogu diro goobaha badankooda, laakiin waxay ku xidhan tahay bixiyaha xawilaadda ee la isticmaalo.
Ma soo diri karaa lacag badan isla markiiba?
Shirkad kasta oo xawaaladuhu waxay leedahay xad ah inta isla markiiba la diri karo. Tusaale ahaan, xawilaadda degdega ah ee PayPal waxay leedahay xad ah $5,000 wax kala iibsiga, tani sidoo kale waa xadka xawilaadda degdega ah wiiggii.
Xawaaladaha degdega ah ma yihiin kuwo degdeg ah?
Waxaa jira xawaaladaha taas oo kuu ogolaanaysa inaad lacag uga xawisho wadan aad isla markaaba u xawiliso, laakiin xaqiiqadu waa hawlgal daqiiqado gudahood lagu fuliyay.
U dirida lacagta kuwa aad jeceshahay maaha inay noqoto hawlgal wakhti badan qaata; waxaad si degdeg ah lacag ugu diri kartaa lacag la'aana inta badan goobaha aduunka, iyadoo qaatahaagu uu caadi ahaan lacagta ku helayo daqiiqado gudahood.
Ka hubi daabacaada ganaaxa wixii kharash ah ama macluumaad kale oo muhiim ah, oo hubi inaad ku faraxsan tahay adeeg kasta oo aad doorato.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkani uu kaa caawiyay inaad fahamto sida ugu dhaqsaha badan lacagta loo gudbiyo.
Ma doonaysaa inaad fahanto aragtiyaha kitaabiga ah ee ku saabsan wanaagaaga dhaqaale iyo barwaaqada? Kadib, waxaad u baahan tahay inaad…
"Maxaan iibin karaa si aan lacag degdeg ah u sameeyo?" Tani waxay noqotay mid ka mid ah su'aalaha loogu badan yahay. The…
13 Hackers oo Fudud oo ku Saabsan Sida Lacag looga Sameeyo Gabayada 2022
Gabaygu waa muran la’aan mid ka mid ah xirfadaha aadka loo dhayalsado adduunka in kasta oo ay quruxdu ku wareegsan tahay wiqiyad kasta…